एनसेलको सस्ताे ‘मेरो प्लान’ अब साप्ताहिक प्याकमा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एनसेलको सस्ताे ‘मेरो प्लान’ अब साप्ताहिक प्याकमा
एनसेलको सस्ताे ‘मेरो प्लान’ अब साप्ताहिक प्याकमा
पुस २९ गते, २०७६ - १४:०८
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि मेरो प्लान अन्तर्गत साप्ताहिक प्लान ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले अब अझ सुलभ दरमा डेटा र भ्वाइस सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन् ।
यो आकर्षक योजना मंगलबार (पुस २९) देखि लागु हुनेछ । यस अन्तर्गत एनसेलले दुई साप्ताहिक प्याकहरु २ जीबी प्लान र ६ जीबी प्लान ल्याएको छ । २ जीबी प्लानअन्तर्गत ग्राहकले कर सहित मात्र रु. ९५.७७ मा २ जीबी डेटा भोलुमको मजा लिन सक्नेछन् । यसका साथै यो प्लान अन्तर्गत ग्राहकले अननेट अर्थात एनसेल नेटवर्क भित्र कर सहित मात्र रु. १.२८ प्रति मिनेटमा भ्वाइस सेवाको फाइदा पनि लिन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी ६ जीबी प्लान अन्तर्गत ग्राहकले कर सहित मात्र रु. १९१.५४ मा ६ जिबी (४ जीबी + २ जीबी भिडियो डेटा) को मजा लिन सक्नेछन् । प्याक अन्तर्गतको भिडियो डेटा युट्युब, आइफ्ल्क्सि, एनसेलको भिडियो पोर्टल तथा गुगल सेवाका अन्य सेवा जस्तै गुगल प्ले, म्याप्स आदि चलाउन प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
यस योजनामा रहेका कुनै पनि प्लान सुचारु गरेपछि हरेक हप्ता स्वतः नविकरण हुनेछ । प्लान नविकरण हुनको लागि मोवाइलमा प्लान अनुसारको चाहिने ब्यालेन्स हुनु आवश्यक छ । मेन ब्यालेन्स प्लान नविकरण गर्न अपुग भएको खण्डमा पनि ग्राहकले विद्यमान शुल्क भ्वाइस प्रति मिनेट कर सहित रु. २.५४ मा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
पुस २९ गते, २०७६ - १४:०८ मा प्रकाशित